Tengai Omuma bu ezigbo ekpomeekpo ekpomeekpo nke ndu ndu | Gam akporosis
Tengai Classic bụ ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ebubata gam akporo iji nyeghachi anyị arcades ndị ahụ Na ọtụtụ agụụ mmekọahụ kpaliri na 80s na 90. Egwuregwu ndị nwere ihe ndị ọtụtụ na-achọ taa, mmụọ nke ha na ikike ijikọ na, n'amaghị ihe kpatara ya, na-eme ka ị na-egwu ma na-egwu egwu ụbọchị.
Anyị na-eche ihu a ahụkarị Arcade na oge a nwere Oriental isiokwu na nnukwu buddha na ndabere na nke enwere nnukwu ndị iro na-anọkarị ihe niile na ihuenyo. The hulking nke ndị Egwulegwu egwuregwu-abịa azụ ọzọ. Gaa maka ya.
1 Nnukwu ndị isi ikpeazụ na ndị na-abụghị
2 Ihe odide 6 igwu egwu na Tengai Omuma
3 Nkà nke arcade
Nnukwu ndị isi ikpeazụ na ndị na-abụghị
Tengai Classic na-ewetara anyị ugbu a nke bụ isi ihe kachasị mma nke ntụrụndụ ndị ahụ; Kedu itịbe na STRIKERS 1945 wepụtara n'afọ gara aga. Mgbe ị na-anya ụgbọ gị na R-Type na ndị isi ndị isi ahụ gosipụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ihuenyo nke arcade ahụ, o juru gị anya mgbe ị na-ele ndị ọzọ egwu; Ee ee, na afọ ndị ahụ enwere ndị egwuregwu nwere ike ịdọta ndị na-enweghị dollar ise iji kpọọ egwuregwu.
Oge ndị ọzọ Egwuregwu ọhụrụ a wepụtara na gam akporo akpọrọ Tengai Classic na-eweghachi anyị. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ inwe mmetụta dị ka arcades ndị ahụ dị na mbụ nke usoro ọrụ ndị a na-ebugharị nke ụgbọ mmiri ndị iro, ọ fọrọ nke nta ka amanye gị n'ọnọdụ nke "Abụ m Jefi" na m ga-ezere ha, lee, ị nwere otu.
mobirix bu onye mbiputa egwuru-egwu a na gam akporo nke na-ewetara anyị ezigbo mmegharị na ihuenyo ka anyị wee were aka ekpe anyị nwee ike iji otu mkpịsị aka chịkwaa protagonist nke njem a juputara na oge siri ike.
Ihe odide 6 igwu egwu na Tengai Omuma
Dị ka ndị ahụ capsules nke ndi iro anyi hapuru, bụ ebumnobi ọzọ iji gbasaa ike anyị iji nwee ike iwepụ ndị iro ọsọ ọsọ.
Tengai Classic na-enyekwa gị ohere igwu ihe nzuzo zoro ezo na ihe ndị bụ isi 6 na anyị nwere ike iji n'oge ụfọdụ. Anyị nwekwara ike ịnwe ikike pụrụ iche yana na anyị na-adụ gị ọdụ ka ị jiri ya mgbe ọ na-arụsi ọrụ ike mana ọfụma na ọtụtụ ndị iro.
Ekwesịrị ikwu na anyị na-eche ihu otu n'ime egwuregwu ndị ahụ anyị nwere usoro nke anyị nwere ike iji napụta onye protagonist site na ịmalitegharị egwuregwu ahụ; ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụghị na anyị na-eji otu mgbasa ozi weghachite ndu 3 i nwere.
Nkà nke arcade
Egwuregwu ndị a, maka ndị niile na-amalite na mmepe nke egwuregwu vidio, bụ zuru okè ihe atụ iji ghọta mkpa nke ụfọdụ arụzi na nko ma na-eri ahụ. Ọtụtụ oge nke a bụ isi furu efu na egwuregwu na-enweghị mmụọ nke ha na-ebido nke anyị na-ele anya maka eserese ha na ihe ọzọ.
Ihe omuma ndi Tengai bu ihe ndi ozo, nchoputa ihe di egwu nke ụfọdụ ndị iro “na-eti mkpu” na oké iwe mgbe niile nke anyị na-agaghị echefu ọtụtụ narị ihe ndị anyị ga-ezere. A na-ahapụ anyị na gburugburu ya na oge ahụ dị egwu na nnukwu ndị isi ikpeazụ anyị ga-achọrịrị ịhụ n'ọtụtụ egwuregwu a tọhapụrụ.
Omuma Tengai dị n'efu na freelọ Ahịa Google Play ya na ekpomeekpo ndia nke gara aga. Ekwela oge iji kporie ndụ gị.
O nwere ezigbo ekpomeekpo ihe ochie niile anyi nwere ike inwe ezigbo oge.
O nwere njirimara nke arcades
Hulking ndị iro na bosses
Gburugburu ebe ha na - eduga anyị
Ọ bụghị 100% kachasị maka mmetụ ahụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Omuma Tengai bụ nloghachi nke onye na-agba agba agba agba na gam akporo